मनकामना मन्दिरको दर्सन गरि आजको राशिफल पढौ – Bhindai Kura
मनकामना मन्दिरको दर्सन गरि आजको राशिफल पढौ
By Bhindai Kura April 22, 2020 April 22, 2020
आज २०७७ वैशाख १० गते बुधबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ?
काठमाडौंमा २ जना नर्समा कोरोना संक्रमण ‘पोजेटिभ’ देखियो
‘विश्वमा अझै खराब स्थिति आउन बाँकी छ’- विश्व स्वास्थ्य संगठन